03/05/2013 20:41 -NY SOA AZO AVY AMIN’ NY SAKAY.
asa raha efa hainao fa misy singa ilain’ny vatana maro ao anatin’ny sakay. Santionany amin’ireny ny: Vitamine A : manamora ny fiasan’ireo « métabolisme », manamora ny fiasan’ny « acides aminés sy ny protéines ». Vitamine E :miaro amin’ny fanapoizinana isankarazany ny taovantsika ka maha antitra faingana azy ireo. Vitamine C : ilaina isak ‘izay reraka, mba hanatanjahana ny hery fiarovan’ny vatana. Manakarena acide ascorbique ny sakay...
16/04/2013 15:49 -Karoty atao « JUS »
Mbola vitsy ny resy lahatra hisotro ranona karoty noho ilay tsirony somary matsaboka iny. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hanatsaranao izany tsirony izany ka ahafahanao migoka ny zava-tsoa rehetra entin'ny karoty ho an'ny vatana. ...
01/04/2013 18:33 -TORO-HEVITRA HO AN’NY VOLO MANIFY
Rehefa manify ny taom-bolo dia midika izay fa marefo kokoa izy oharina @ karazam-bolo hafa. Ireto misy toro-hevitra mety hanampy anao. Voalohany aloha dia aza mizatra mamatotra volo loatra fa mety hanapatapaka sy hahavaky ny taom-bolo izany. Rehefa manasa loha ianao dia araho otra kely eny @ foto-bolo mandritra ny shampooing mba hahatonga azy tsy dia hipetaka loatra rehefa maina. Mialoha izany rehetra izany nefa dia manaoava « bain d’huile » hatrany isaky ny hanasa loha. ...
14/03/2013 20:53 -FITSANGATSANGANANA ALATSINAIN’NY PASKA 1 Aprily 2013
Toerana : Iavoambony Isahafa (Lazaina), Antananarivo Avaradrano. Antsoina ireo rehetra te handray anjara amin’ny lalao mba hisoratra anarana isa-tsampana....
02/03/2013 20:59 -NY VOALOBOKA SY NY SOA ENTINY
Araraoty ny fahavokaran’ny voaloboka hanadiovana ny taova ao anaty, hikolokoloana ny fahasalaman’ny lalandrà, sns. Fintinina aminao ireo vokatsoa rehetra entin’ity voankazo ity ho an ‘ny fahasalaman’ny vatantsika. Sokajiana ho anisan’ireo voankazo mitondra hery be indrindra ny voaloboka. Noho ireo otrikaina entiny, dia misoroka ny harerahana izy, indrindra ho an’ireo mampahia tena... ...
12/02/2013 14:25 -NY FAHATAPAHAN’NY LALAN-DRA
Tsy mifidy taona intsony ankehitriny ny fahatapahan’ny lalan-drà fa mety ho tratrany avokoa na tanora na ireo efa nahazo taona. Ireo tsara ho fantatra....
01/02/2013 21:26 - NY VOKATSOA ENTIN’NY FIHINANANA PAOMA.
Ny soa entin’ny paoma: Ao anatin’ny paoma dia misy Calories, Glucides izay ireo no anisan’ny betsaka indrindra ao anatiny. Misy koa ny Proteina,Lipida, Fibres alimentaires, rano. Ny fisian’ny « antioxydant » ao antin’ny paoma dia miaro...
19/01/2013 21:24 -NY POIZINA FOHINAO
Ny sigara no tiana asiana resaka eto. Resahina ihany satria lasa mpifoka tsy fidiny ny olona manakaiky izay mifoka, ary ao koa ireo mbola tsy afaka amin’izany sigara izany. Filàna miteraka olana ny sigara raha tsy hitanisa afatsy ny olana ara-pahasalamana eo amin’ny fo, ny lalan-dra, ny cancer isankarazany isika. ...
31/12/2012 19:33 -IREO SOA 10 AZO AVY AMIN’ NY FIHINANANA SOSETY
IREO SOA 10 AZO AVY AMIN’ NY FIHINANANA SOSETY Efa saiky mahazatra ny maro ny manao ny sosety ho fangaron-daoka, lasary…fa tsy vitsy koa anefa no tsy tia azy ity. Aoka ary ho fantatsika fa mahatsara ny fahasalamana ny fihinanana sosety. Na dia sokajiantsika ho “legumes “koa aza izy ity dia voasokajy kosa ho anisan’ny voankazo....
27/11/2012 22:42 -Azo atao @ tarehy ny « vinaigre de cidre »
Betsaka ny fitsaboana azo atao @ alàlan’ny « vinaigre de cidre », ampiarahana @ tantely na koa tapohina rano…Fantaro fa azo hikojakojana hodi-tava koa ity akora ity. Ireto misy fanomanana vitsivitsy ...